सुल्झिएला कस्मिर विवाद ? – Maitri News
सुल्झिएला कस्मिर विवाद ?
नयाँदिल्ली । जम्मु कस्मिर भारतको एकमात्र यस्तो राज्य हो, जसले राष्ट्रिय झन्डासँगै आफ्नो झन्डा पनि राख्न सक्थ्यो। उसको आफ्नै संविधान पनि थियो। आफ्नै संविधान र झन्डा भएको जम्मु कस्मिर सात दशकअघि एउटा स्वतन्त्र देश थियो। अहिले जम्मु कस्मिरका विभिन्न भाग भारत, पाकिस्तान र चीनले नियन्त्रणमा लिएका छन्। तर धेरै कस्मिरीहरू अहिले पनि छुट्टै देश बनाउने सपना देख्छन्।
Previous Previous post: जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने भारतको प्रयास
Next Next post: सदनमा बाबुराम भट्टराईको चर्चा